The Perfect Cheap Off Road Electric Self vakadengezera sikuta - Jomo Technology Co., Ltd
The Range ndechimwe zvinokosha kufunga nepo Pakusarudza motokari electrically dzinofambiswa. Self BALANCInG sikutanokuti pasi-nokukurumidza motokari, nomwoyo kwakafanana vashambadzirane zvakafanana. Yakataurwa Koowheel, kuti Hoverboard K7 iri patented se "maviri-vhiri, kuzvicheka-vakadengezera private motokari.". Kana muri Tikapapfuura, Mujaho, kana pakufamba kuenda kwaaishanda, Hoverboard K7 rinogarova nokugadzikana. The Hoverboard K7 Self-vakadengezera sikuta 8.5inch hoverboard guru mavhiri mumugwagwa, saka unogona kutamba naro uyewo pamusoro uye pasi mugwagwa. Imwe Model K5 VAVIRI vhiri KUZVIRIRITIRA vakadengezera sikuta pamwe hunyambiri MAKARALI USB uye akangwara akatungamirira mwenje. Mumwe musiyano kuti uchawana pakati Segway uye vashoma nokuzviremekedza BALANCInG bhodhi iri pasina handlebars, uyezve, 50% uremu mumwe divi kuti tisambozviti motokari mwero pamberi dzokai pamusoro uye pashure dzokai kure, uye zvikuru wakatsiga, nyore uye njodzi kuchovha, kunyanya beginners. Right pano pana Koowheel, uchawana imwe zvakanakisisa Mutengo pamusoro Scooters kuzvipira vakadengezera.
The Koowheel Hoverboard mumwe pakati akakwana "Made in China" nokuzvidzora vakadengezera Scooters. Zvinofungidzirwa kuti sikuta ichi anofanira chokupedzisira iwe kushoma makore 10, zvinoreva uchaona zvachose kuwana zvikuru pamusoro mari yako pose unosarudza rwokuzvipira urwu vakadengezera Scooters. New maviri vhiri unozvipa vakadengezera yemagetsi sikuta . Sikuta uyu ine divi Kudzikamiswa gadziriro kwete yemanyorero aripo Scooters siyana. Kunze kwaizvozvo, sokuti zviri sikuta ane kumira pakakwirira uye vaviri mavhiri kuti vari guru kukwezvana mune dzimwe Scooters kutungamirira. The 2 Wheel vakadengezera sikuta zviedza 's yakajeka, uye uchazonakidzwa kumhanya pasi muchina uyu nyore uyewo. The refu bhatiri noupenyu yainakidza Double MAKARALI USB vakurukuri hurongwa kunounza wemishonga akakwana panguva usiku zvinoita wakanaka kuva zvakarurama rwendo, akatungamirira zviedza runobwinya mumugwagwa, kuteerera mumhanzi uye ane zvakakwana ruzivo. Kunze, pane mubato iri pakati, saka zvinova nyore chaizvo kuti auye.
Izvi mhando sikuta unozvipa vakadengezera , kusiyana nevamwe, aiva 8pcs giravhiti sensors, kwete kugara 4pcs silicone Sora unokurumidza uye wakatsiga, ezasi chakaremara mwero. We kare vakanga aishandisa bvumidzwa uye asiri kukanganisa pamwe Chic, solowheel kana Razor, ruzivo zvakasiyana uye kwedu bvumidzwa. Kana iwe uri munhu munyoro-ruoko, kusarudza 'mutsva' chechetere. The matai vane Zvinokosha zvakaisvonaka uye rinorema basa, uye izvi zvinogona kubata kumbotambudzika chero mamiriro enzvimbo mhando. Tires uyewo kubatsira vatasvi kuwana zororo rakakwana apo vaifamba. Pakufamba riri mafaro-chero bedzi pasi zviri nyore.
Post nguva: Oct-05-2017